दशैंको मासुः यसकारण विषालु हुनसक्छ के छ पोषणविद्को सुझाव ? - Sainokhabar
होमपेज / समाचार / दशैंको मासुः यसकारण विषालु हुनसक्छ के छ पोषणविद्को सुझाव ?
दशैंको मासुः यसकारण विषालु हुनसक्छ के छ पोषणविद्को सुझाव ?
दशैंमा खसीको त्यो पनि पक्कु, खास परिकार हो । त्यसबाहेक अहिले रागा, भैंसी, बोका, च्याङ्ग्रा, कुखुरा, हास, माछा लगायत थरीथरीका मासु पाक्ने गर्छ । त्यसबाहेक विदेशबाट आयतित सामुन्द्रिक खाना पनि हाम्रो भान्सामा सामेल हुन थालेको छ ।
खासमा मासु भन्ने चिज शरीरमैत्री होइन । यसले शरीरलाई जति फाइदा गर्छ, त्यो भन्दा दोब्बर नोक्सान पुर्याउँछ ।
तर, दशैंको मेसोमा नेपाली समाजले अत्याधिक मासु खपत गर्छ । दशैँमा खसी काट्नै पर्ने मान्यता स्थापित भएकाले पनि दशैँमा प्राय सबै नेपालीको घरमा मासुको भण्डार हुन्छ । अत्याधिक मासुको सेवन गर्नुलाई त्यति स्वस्थकर मानिदैन । अझ कतिपय रोग लागेका मानिसलाई त मासु विषसमान नै हुन्छ–
– तौललाई कम गर्नका लागि प्रयासरत हुनुन्छ भने मासु खाँदा भातरचिउराको मात्रा एकदमै कम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सलाद, सागसब्जी (आलु वाहेकॿको प्रयोगलाई भने सकेसम्म बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा शरिरको अतिरिक्त शक्ति मेटावोलिज्मको मोडमा जान्छ ।
ध्यान पुर्याउनैपर्ने कुरा
– उच्च रक्तचाप – मधुमेह – मुटु रोग – मृगौला रोग – यूरिक एसिड – मोटोपन – कोलेस्टेरोल बढ्ने
– कब्जीयत – क्यान्सर – ग्यासट्राइटिस
– आन्द्रा–भुडी राम्रोसँग सफा गरिसकेपछि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसरी पखाल्दा सफा पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनुभवी मानिसले मात्र पखाल्ने काम गर्नुपर्छ ।